Ogaden News Agency (ONA) – Dhalinyaro Kabaxsatay Xukunka Dag Daga Ah oo Ugalay Jabhadaha OLF & Gimbot 7.
Dhalinyaro Kabaxsatay Xukunka Dag Daga Ah oo Ugalay Jabhadaha OLF & Gimbot 7.
Posted by Dulmane	/ December 26, 2016
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in dhalintii wadanka Itoobiya ay ugaleen jabhadaha kasoo horjeeda xukuumada wayaanaha.
Sida xogtan aan kuhelay dhalin yaro aad ubadan oo ka firxatay xukunka dag daga ah ee wadanka lagu soo rogay ayaa ugalay jabhadaha OLF iyo Gimbot 7 oo kadagaalama Gobolada Oromia iyo Axmaarada. Qaar kamid ah dhalinyaradan oo saxaafada lahadlay ayaa sheegay in ay u adkaysan waayeen hanjabaada iyo bahdilka ay ku hayaan ciidanka wayaanuhu kuwaas oo si joogta ah udhibaateeya shacabka.
Sidoo kale dhalintan ayaa shacabkooda ugu baaqay in aysan isu dhiibin gumaysiga handadaada joogtada ahna aysan dhag jalaq usiinin isla markaana ay garab istaagaan halganka loogu jiro in kooxda TPLF shacabka lagaga dulqaado.
Taliska guud ee wayaanaha ayaa wadanka kusoo rogay xukun dag dag ah kaas oo ciidamada lagu faray in ay umadax banaan yihiin kutagri falka hantida shacabka isla markaana ay dili karaan qofkii kahor yimaada.
Dhinaca kale shucuubta kala duwan ee kuhoos jira taliska wayaanaha ayaa go’aan saday in ay wadaan kacdoono joota ah kuwaas oo isugu jira dagaal afka ah iyo adinka oo laqaado si lootikhaan tikhiyo gumaysiga daashaday shacabka.